Mandefa Ireo Zanabolana OneWeb Voalohany Ny Sambondanitra Rosiana Soyuz, Saingy Naraikitry ny Lalàna Maneritery Teto An-tany · Global Voices teny Malagasy
Potika sy may ny fanantenan'ireo Rosiana hahazo aterineto tsy voasivana
Voadika ny 05 Avrily 2019 17:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, srpski, Español, English
Ny sambondanitra Soyuz ST-B mitondra ireo zanabolana OneWeb enina eo amin'ny toerana fandefasana azy // Pikasary an'ny Runet Echo
Ny 27 Febroary 2019, sambondanitra Soyuz iray no nanaparitaka ireo zanabolana enina voalohany indrindra amin'izay kasaina ho andian-kintana iray amin'ireo mpampita anjatony maro miodidina aminà orbita ambany, izay afaka manome fidirana amin'ny Aterineto eran'izao tontolo izao, eny fa na dia any amin'ireo faritra mitsitokatokana tsy ampy fotodrafitrasa aza.
Ny tambajotra rosiana RT no nandefa lahatsary iray tao amin'ny Youtube nampiseho ny fandefasana, mitondra ny lohateny hoe “Aterineto ho an'ny ‘rehetra’ & ‘manerana izao tontolo izao': Mandefa ireo zanabolany OneWeb voalohany ny sambondanitra Soyuz”
Ao amin'ny tany Rosiana kosa anefa, toa tsy lafatra toy izany ny zava-misy. Fotoana fohy mialoha ilay fandefasana, nanao sonia vahaolana iray ny governemanta izay mitaky ny fandalovan'ireo zanabolana rehetra mifamoivoy ao amin'ny firenena any amin'ireo toby fidirana nomen'ny governemanta fahefana. Na ireo mpandraharaha zanabolana iraisam-pirenena misy toy ny Iridium sy ny Thuraya na ireo orinasam-pifandraisan-davitra Rosiana dia samy ho takiana hanangana ireo toby ireo amin'ny volany manokana ary aorian'ny fanarahamaso lalina sy fanomezandàlana avy amin'ireo masoivohon'ny fiarovana Rosiana: ny biraon'ny sampam-pitsikilovana lehibe nasionaly, ireo Sampana Fiarovana Federaly FSB sy FSO, misahana ny fiarovana ireo tomponandraikitra ambony ao amin'ny firenena.
Hatrany am-piandohana, notakian'ireo manampahefana Rosiana tamin'ny fomba feno herisetra ny tetikasa OneWeb sady nanome toky izy ireo fa hifehy araka izay tratra ny fipariahan'ny vaovao. Na teo aza ny fifanarahana fiaraha-mitantana teo amin'ny OneWeb sy ny Roscosmos, izay masoivoho an'habakabaka an'ny Fanjakana Rosiana, fotoana fohy mialoha ny fanokanana ny fanombohan-draharaha kosa anefa dia nivarotra ny ampahany betsaka tamin'ny petrabolany taminà sampandraharahan'ny Roscosmos iray ny OneWeb, izay nametraka ilay tetikasa ho eo ambany fifehezana henjan'ny governemanta Rosiana. Nanohitra tsy an-kiato ny fahatongavan'ny OneWeb ny FSB, mitanisa manokana ireo ahiahy ny amin'ny mety hampiasàna ilay tambajotra hanaovana asa fitsikilovana. Voatatitra tanatin'ny lahatsoratry ny Reuters tamin'ny volana Oktobra lasa teo ny fanambaran'i Vladimir Sadovnikov, tomponandraikitra anatin'ny FSB, fa “mety hanjary hiankina tanteraka aminà sampandraharaha ivelany misahana ny zanabolana ireo faritra sasantsasany ao Rosia”.
Tany am-boalohany, noraisin'ireo Rosiana mpampiasa ho toy ny fanafody iray enti-manohitra ny fanivanana mbola mihahenjana hatrany misy eo amin'ny fahalalahana miteny anaty aterineto ny OneWeb sy ireo tetikasa mpifaninana mitovy aminy avy amin'ny Facebook sy ny SpaceX.
Ho afaka hiditra amin'ilay tambajotran'ny SpaceX ireo mpampiasa ary hahazo Aterineto, miala ireo sivana rehetra kasain'ny governemanta atao. Nanjohy ny hazakazaka ny OneWeb sy ny Telesat. Isan'ireo fangatahana rehetra ho an'ny fandefasana ireo zanabolana: 18.470. Tokony hitentina manodidina ny 200 dolara eo ny sandan'ny iray amin'ny fitaovana iantefany.
Niova haingana ny korana rehefa nazava fa tsy vitan'ny hoe nifehy ny ampahany betsaka tamin'ny petrabola tamin'ny fanombohana ilay tetikasa fotsiny ihany ny governemanta Rosiana fa mbola niandrandra ireo fifamoivoizana rehetra handalo toerana fidirana voaara-maso mafy ihany koa.
Nolavin'ny governemanta Rosiana ny latsabato momba ny fidirana amin'ny Aterineto amin'ny alàlan'ny zanabolana tsy mandalo ireo toerana fidirana sahanin'ny governemanta.
Namintina ity fahadisoampanantenana ity tao anatinà lahatsoratra iray malaza ao amin'ny Telegram i Alexander Plushev, mpanao gazety ara-teknika iray malaza sady mpanentana ao amin'ny onjampeo tsy miankina Feon'i Moskô,
Imbetsaka aho no naheno momba ity fihevitra diso ity fa ny tontolon'ny aterineto no fanavotana antsika amin'ireo “lalàna Yarovaya” sy ny “Aterineto masi-mandidy”. Miresaka momba ny OneWeb sy ireo vitsivitsy mitovy aminy aho. Maro aza ireo voafitaka ka mihevitra fa ho maimaimpoana ity Aterineto ity. Tsy misy zavatra lavitry ny tena marina nóho izany: tsy vitan'ny hoe lafo vidy fotsiny izy ity raha oharina amin'ny fenitra ankehitriny, fa iharan'ireo fitsipika mifehy ny fanivanana ihany koa izy. Misy io fihevitra diso io fa hisy Aterineto maimaimpoana ho taterina mivantana anaty findainao na ny solosaina fentinao mandehandeha mihitsy aza. Saingy tsy izay no fandehany. Tsy noeritreretina mba hialàna ny fanivanana votoaty ilay rafitra, noho izany aza manantena azy ireo hanandrana akory. Nitaky fitaovana nandalo fepetra henjana momba ny fanafarana entana ihany koa izy io, ary ho fanampin'izay dia takiana ny fananan'ireo mpandraharaha fahazoandàlana avy amin'ny FSB.
Aza manantena fahagagana, tsy hisy vahiny ho avy hanavotra antsika eo. Ary aza voafitaka: tsy misy Musk na Zuckerberg hanatanteraka tafika mendrika mba hanafaka anao amin'ireo gejan'ny sivana, indrindra raha hatao maimaimpoana. Tsy maintsy avy amin'ireo tongotsika roa ihany no hizorantsika eo amin'ny làlana mankany amin'ny hasambarana.
Milaza momba anà andian-dalàna iray sy fitsipika maneritery naterak'ilay onjam-panoheran'ny vahoaka tamin'ny taona 2011-2013 niadiana tamin'ny kolikoly ataon'ny governemanta sy ny hosoka tamin'ny fifidianana i Plushev. Ho valin'izay, nandany lalàna maromaro mametra ny fahalalahana mivory sy manara-maso ary manenjika ny fahalalahana miteny anaty aterineto ireo manampahefana Rosiana. “Ny Lalàna Yarovaya” dia andianà fanitsiana mamaritra ireo fitahirizana angon-drakitra goavana, izay tokony hiadiana amin'ny “ekstremisma”. Vao haingana dia nampian'ny “Aterineto masi-mandidy” ireo volavolan-dalàna, fanambarana sy lalàna marobe maneritery izay manolotra fotodrafitrasa nasionaly mampiasa ny teknolojian'ny informatika mba hiarovana an'i Rosia amin'ny mety hisian'ny “fahatapahan'ny” Aterineto manerana ny firenena (izay tsy dia mampino loatra) .
Nanambara paikady iray mahabe fanantenana i Vladimir Putin vao haingana izay, mikendry ny hanatsara ny hazondamosin'ny teknolojian'ny informatika ao amin'ny firenena ary hitondra Aterineto mora kokoa sady azo ianteherana kokoa ho an'ny Rosiana rehetra – raha tsy hoe angaha miandrandra ny ampiasa izany hamoahany ny hasosorany ry zareo.